MCRB submits comments on draft Petroleum Bill - သတင်းစဉ်
You are here Home » သတင်းစဉ် » MCRB submits comments on draft Petroleum Bill
MCRB has submitted comments to Parliament.
MCRB has also shared the Myanmar translation of Chapters 4-7 of the the SWIA with the Committee.
Ethical Marketing for the 21st Century in Myanmar
လဖက်ရည်ဖိုးမပေးပါ။ “အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးလက်စွဲ” စာအုပ်ကို ခေတ်နှင့်လျော်ညီအောင်ပြုပြင်တည်း ဖြတ်ရန်အတွက် ပါဝင်ကူညီမှုများ ရှာဖွေ
ဖေဖော်ဝါရီ 12, 2021
ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ နိုင်ငံများစွာသည် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်လုံခြုံမှုနေ့ (Data Privacy Day) ကိုကျင်းပနေကြသည်။